नेपाल एसबिआई बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २७ भदौ २०७८)
बैंकको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म वितरणयोग्य नाफाको आधारमा लाभांश क्षमता ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । गत चौथो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा रु. ३३ करोड ९२ लाख ५ हजार रहेको छ ।
उक्त अवधिसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी रु. ९ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ७७ हजार छ । गत चौथो त्रैमासम्म रु. ९६ करोड ९ लाख ६१ हजार खुद नाफा गरेको बैंकको जगेडा कोषमा रु. ४ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख ३१ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
रु. १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको बैंकले रु. ९६ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रु. १० दशमलव १२ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. १६२ दशमलव १९ रहेको छ ।
बिहीबार बैंकको प्रतिकित्ता शेयर मूल्य रु. ३८३ पुगेको छ ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो टुप्पी र छोटो पुच्छरसहितको कालो लामो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा आगामी दिनमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ३३ दशमलव ३२ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन २ दशमलव ७९ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यूून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्य रेखाभन्दा तल छ ।
बिहीबारको शेयर मूल्य रु. ३८३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिए रु. ४०१ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ । कम्पनीको गत कारोबार दिन बुधबार शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३८२ रहेको थियो, जुन ६१ कारोबार दिनयताकै न्यून मूल्य रहेको छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ४ असोज २०७८)[२०७८ असोज, ४]
मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ४ असोज २०७८)[२०७८ असोज, ४]
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ४ असोज २०७८)[२०७८ असोज, ४]
प्राइम कमर्शियल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २७ भदौ २०७८)[२०७८ भदौ, २७]
नेपाल एसबिआई बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २७ भदौ २०७८)[२०७८ भदौ, २७]